Ciidamo cusub oo imaanaya Xeebaha Soomaaliya | Muqdisho News	Wednesday, July 29th, 2015	Home
Ciidamo cusub oo imaanaya Xeebaha Soomaaliya
Jan 31, 2015 - jawaab	Ku dhawaad 70 ciidamada dowlada Sweden ayaa kusoo wajahan bariga qaarada Africa si ay qeyb kaga noqdaan dadaalka looga hortagayo kooxaha burcad badeeda Soomaalida ee afduubta maraakiibta adeegsata biyaha Soomaaliya iyo meelaha ka baxsan.
Ciidamada la qorsheynayo inay tagaan gacanta Cadan ayaa qeyn ka noqon doona howlgalka afaraadka oo dowlada Sweden ay ka wado gobolka, sida lagu sheegay warbixinta lagu sheegay.
Ciidamada ayaanan ku ekaan doonin adeegsiga maraakiibtooda dagaalka oo waxay la shaqeyn doonaan ciidamada dowlada Holland ee qeybta ka ah howlgalka loogu magac daray Atlanta, si ay kaga hortagaan weerarada burcad badeeda.
Swedes waxay ku hadlaan luqad wanaagsan oo aan isku fahmi karno, waxaana u wada shaqeynaynaa si dhow wayna sahlanaan doonaan inaan wada shaqeyno”sidaasi waxaa yiri Leo De haan oo kamid ah askarta Holland isagoo ka hadlay warbahinta Sweden.
“Waxaan nahay wadan yar oo leh qorshe difaac oo mideysan waxaan u baahanahay wadajir, inaan u wada shaqeyno labada wadan”sidaasi ayuu yiri markale askariga ka tirsan dowlada Holland.
Seddexdii sano ee lasoo dhaafay waxaa yaraaday weeraradii ay geysan jireen kooxaha burcad badeeda Soomaalida, waxaana la sheegay in horumar laga sameeyay weeraradii ay geysan jireen.
Sanadkii 2011, seddex sano ka hor kooxaha burcad badeeda waxay qabsadeen inka badan 30 markab iyo shaqaale ka badan 700 oo ruux sida ay sheegeen Midowga Yurub, waxayna burcad badeeda ay ka dalbanadeen dhaqaalo badan dowlada iyo shirkadaha ay dadkaasi u shaqeynayeen.
Hoos u dhac weyn ayaa ku yimid tirade weeraradii ay qaadi jireen, waxii ka dambeeyay markii ciidamada China iyo Mareykanka ay howlgalo joogto ah ka sameeyeen biyaha gacanka cadan iyo meelaha ka baxsan.